Isticmaalka sonkorta badan oo kordhiya khatarta cudurada halista ah ee wadnaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jurek Holzer/Scanpix
Isticmaalka sonkorta badan oo kordhiya khatarta cudurada halista ah ee wadnaha
La daabacay tisdag 4 februari 2014 kl 12.29
Xiriirka ka dhexeeya isticmaalka sonkorta iyo halista in loo dhinto cudurka wadnaha ayaa lagu caddeeyey daraasad ay sameysey hay’ad Maraykan ah oo qaabbilsan ka hortagga cudurada la isqaadsiiyo loona soo gaabiyo CDC. Sidaasna waxaa soo weriyey wargeyska Svenska Dagbladet.
Natiijooyinka laga helay daraasaddaas waxaa ka mid ahaa in haddii maalintii la cabbo hal qasac oo cabbitaan sonkortu ku jirto ay saddex meelood oo meel kordheyso khatar in loo dhinto cudur wadnaha asiiba.
Waxaa daraasaddu ka hadleyso wa asomkorta lagu daro ee ma ahan sonkorta dabiiciga ah sida tank u jirta furutada ama miraha macaan.
Dadka iswiidhishka ayaa celcelis ahaan boqolkiiba toban tamartooda ka hela sonkorta. Laakiin kuwo badan ayaa dhaafa xadka sonkor-isticmaalka. Qaar aad u badan oo ka mid ah bulshada iswiidhishka ayaa sida daraasadda lagu muujiyey sonkorta ay maalintii qaataan u dhigantaa koror dhan saddex meelood oo meel heer ka khatarta in loo dhinto cudur xagga wadnaha.